Silsiladdii Xaydha Qalinkii Shaafici Qaasim Nuur. | Somaliland Today
← CAYDHI CALMAANIYADDA! QALINKII: GUULEED MAXAMED YAASIIN (DALXA)
DAAWO: Xildhibaano Ka Tirsan Golaha Guurtida Oo Dadwaynaha Gobolka Maroodi-jeex Ugu Baaqay Inay Diwaan-galiyaanta U Soo Baxaan. →
Silsiladdii Xaydha Qalinkii Shaafici Qaasim Nuur.
Soomaalidu waa ummad suugaanta quudata, gabayga iyo gabyaaguna waxay noloshooda kaga jireen meel sare.
Raggii ay Soomaalidii hore qaddarin jirteyna waxa ka mid ahaa wadaadka diinta yaqaan, gabyaaga aftahanka ah iyo isinka ama hoggaanka dhaqanka. Waa ummad odhaaheed oo waxay fac-ka-fac isu soo gudbinayeen maahmaaho, meerisyo gabay ah iyo sheekooyin murti leh, kuwaas oo aanay jirin kutub ay ku qoran yihiin oo laga soo min guuriyo balse afka uun lagu kala dhaxli jiray. Iyadoo ay sidaa tahay ayaa haddana waxa far qorid la’aanta kaga lumay suugaan badan iyo weliba kasmooyin idil oo madax bannaan sida xiddigiska, isku daaweynta dhirta iyo barashada degaanka.
Markii qoraalka farta Soomaaliga la hirgeliyey 1972 kii ayaa la isku deyey bal in la daba qabateeyo suugaan badan oo haddii aan markaa la qori lahayn aan maanta wax naf leh laga xasuusteen. Suugaantii xilligaa la aruurshay waxaa ka mid ahaa gabayadii xiisaha lahaa ee Silsiladdii Xaydha, taas oo ah sheekada iyo tixaha is huwan ee aan maanta idinku jalbeebin doono.
Hilaadda 1941 kii kolkii dagaalkii labaad ee adduunku socday ayaa socoto awri u shixman tahay ka ambabaxday ceelka Burco. Socotadaasi waxay ahayd rag usoo safray reerahoodii oo markaa yiillay bannaanada Xaguuga iyo Xalxalis. Raggaasi waxay ka koobnaayeen xidid iyo xigaalo aan la tarraxin. Markii Burco laga soo ambabaxay jicsinkiina badankiisii lasoo gatay ayaa nin la odhanayey Xirsi Cali Buraale oo Xirsi-Caamir loo yiqiin lagu yidhi, “Xirsiyow adiga ayaa awr caddaysimo ahi kuu xidhiidhsan yahaye, orod oo subag aynu kusii jid-marno inoo soo iibi.”
Xilligaas subagga rag shafeecsado ama jicsin u qaato waxa ugu mudnaa sixinka, haddii la waayana dhuuxa ama heenka hadba sida loo yaqaan. Xirsi-Caamir wuxuu soo iibiyey subag heen ah, balse markii danbe lagu ilaaqay, xaydhna laguba sheegay. Dhaliishaa waxa aloogay Weerar Cali Geelle oo raashin uu Burco kasoo miistay safarka ugu xidhiidhsanaa, socotadana ka mid ahaa.
Weerar Cali Geelle wuxuu Xirsi-Caamir ku haaraamay inuu wax usoo hadoodilay oo subag aan wanaagsaneyn uu ragga la hor yimid. Si gaar ah waxa uu uga hafeefanayaa inuu bisad ka yaraaday markii nimankii ay xididka ahaayeen soortii xilka lahayd lasoo hordhigay. Midhkaas oo haddiiba uu jiro Xirsi facshar iyo fadeexad ugu filnaa. Bal u fiirso sida raggii hore cidda ay hablaha kala qabaan uga sarriigan jireen, waa intii xishoodka la huwanaa ee xirribuhu dadka ku yiilleen e.
Markii reerihiiba lagu soo dhowaaday ee la maraayo meesha la yidhaahdo Ceeg, subaggiina lagu soo jid-maray ayaa Weerar af labadii yeedhay, wixii uu qoonsadayna diirka ka qaaday. Wuxuu Weerar halkaa ka mariyey tix markii danbe ka gar-naqeedii afarta geriyahan ba ku ekaaday, illaa ay gaadhay heer nin kasta oo wax is-taawiyey oo geyigaa joogeyba isku deyey bal inuu itaalkii ka gar-naqo. Waxaanse meesha ka madhnayn in markii uu Weerar gabayga bilaabay uu uga dan lahaa inuu abuuro kaftan jidaasha laysku dhaafiyo, jidkuna kusoo gaabto.
Sida aynu ka dhex bidhaansan karno tixaha inagu soo food leh, raggii hore si hufan ayuu u haasaawi jiray una kaftami jiray iyadoo aanu afku ka duulin arrinkuna ka dhooqoobin. Ayeyday Cambaro Faarax Bullaale, oo ah waayeel dhaqan yaqaan ah, mar aan u akhriyey labada gabay ee silsiladdan u horreeya, waxay la yaabtay sida farshaxannimada leh ee ay raggaasi isugu hal celinayeen, waxaanay igu tidhi, “Ayeeyo hadday kuwa maanta jooga yihiin markiiba huudh ayay isu qaadi lahaayeen.” Si kastaba ha ahaatee gabayada silsiladdii xaydhu, marka laga tago hadal haynta sheekadooda, waxay reebeen meerisyo badan oo halhays noqday kuwaas oo loogu maahmaaho kolba cidda loola gol leeyahay.
Iga hooya haddaba tixdii ugu horreysay ee uu Weerar Cali Geelle silsiladdaas ku ibo-furay. Isaga oo Xirsi ku darraabaya in aanu si wanaagsan ugu hagar bixin ee uu hafaryo uun usoo hadoodilay ayuu yidhi:
Xirsi-Caamirow layna hiif, laguna haaraanye
Allaylahe habaar baad qabtaa, waana la hubaaye
Rag hadduu hor fule kaa dhigtoo, hibo laguu yeelo
Waa loo hagaajaa anfaca, hadasho waa ceebe
Nimankaan hablaha kala qabniyo, hurinta reer Muuse
Inaad la hor martaa may ekayn, waxan habboonayne
Hor Ilaahay soor wacan adaan, noogu hawl geline
Hilibka iyo maakhirigaba waa, heli karayseene
Hareeraha kun miidaa jiroo, laga hiraabtaaye
Meeshaan hannaan gobannimo iyo, hadiyad eegaayey
Haf miyaad la tidhi xaydh sidaad, haan ku dhayanayso!!
Markii uu Weerar tixdaa la sara-kacay, faqiina fagaare u beddelay ayaa Xirsi Cali Buraale na is daafacay. Gacanta kamuu hadline afka ayuu ka hadlay. Farshaxan buu ahaaye, dhinacyo badan ayuu Weerar wax ka tusay. Marka hore waxa uu Weerar Xasuusinayaa inay labadooduba magaalada ku wada jireen, uuna haystey kansho uu isaguba ku iibsado subag iyo surbiyaan kolba kii uu jid-mar ahaan u janto.
Mar labaadka ayuu Xirsi ku gar-naqsanayaa in subaggii uu benderka kasoo gaday somal-haadkii socodka dheer la iska soo xigsiiyay, dhawr subaxna safraddii la iskaga biiyey, sidaa darteedna tixda uu Weerar ku alaladay ay tahay hadal meel waayay. Meel kale oo gabayga ka mid ah ayuu XirsiCaamir sidii wadaad xarafka diineed ku xeel dheer uu u wacdiyayaa Weerar. Wuxuu ku waaninayaa in wixii jidiinkiisa mara ee uu shafeecsado wax ka sheeggoodu aanu habboonayn. Gebo gebada ayuu Xirsi ku dacwiyayaa in haddii soortii uu isagu soo gaday Weerar la silloonaatay ay ahayd in uu dhinac isaga duwo, dheefteedana ka qado. Waxa uu yidhi XirsiCaamir isaga oo Weerar u hal celinaya:
Hadal kaad i tidhi Weerarow waa, huf iyo beene
Adiguba hortey waxaad fadhidey, hooska tuulada e
Habeennuu wax sii ururiyaa, Hawd ninkii qabanne
Haydaarada iyo waad ogeyd, hilinki dheeraaye
Akhristeyaal aan idiin soo koobo, idinna xasuusiyo qaybtii hore ee qoraalkane, waatey ahayd afartameeyadii qarnigii tegey, waatey rag door ah, asii aan saa usii kala durugsanayni, ku ballameen inay isku sii lug-darsadaan iyagoo ka ambabaxaya ceelka Burco, una sii jeeda rugihii ay reerahoodu yiilleen oo ku beegnaa hawdka Togdheer. Saluuggii ka dhashay subaggii jicsinka loo qaatey awgii, waatuu Weerar Cali Geelle gabay ku warjeefay Xirsi Cali Buraale oo ahaa ninkii soo gaday sahaydii subagga iyo xaydha loo kala garan waayey. Xirsi Cali Buraale na waatuu iska deedafeeyey eeddii lagu soo dudduucay, isaga oo gabay garnaqsi ah kaga jawaabey.
Iyadoo xaajaddii la rogrogaayo, loona rag badsanaayo ayaa Weerar Cali Geelle wixii dhacay dhankiisa uga warramay nin la odhan jirey Maxamed Nuur Abokor oo “Huube” ku magac dheeraa. Waxa uu ugu war bixiyey in Xirsi-Caamir xurmadii ka tegey oo nimankii ay xididka ahaayeen xaydh madow faraha u geliyey.
Asalkeeda bannaanba, markii garta la furfurayo ee golaha laysugu yimaaddo, waxa ay ku bilaaban jireen, ‘Ilaahow aqoon darrana ha nagu cadaabin, eexna ha nagaga tegin’, taasna Maxamed Nuur Abokor, waa Huube e, ma uu ilduufin, saa ‘innagaa cashiiro ah haygu soo cabannin’ ayaabu Xirsi Caamir ugu quus gooyeyba e.
Gebogebada gabaygiisa ayuu Huube u ban-baxayaa sidii uu baduugaha uga dhigi lahaa doodda Xirsi ee biyo-dhaceedu yahay ‘hadduu dhuunigu silloonaa maxaa loo dharqanayey’.
Isagoo cuskanaya dulucda maahmaahdii ahayd ‘neef gawracani geedo kama baydho’, ayuu Huube arrintaa ku maakubay haddii geelu- waa xoolo dhaqashadiisa dhibi ku mataansan tahaye – meel dheer u kicitimo, kolkii niman dhawr ah loo diro ee ay dhengedda soo saaraan, waxay dhabbaha soo hayaanba markay dhanqalmaan, dhibicda biyo ah ee tulud tuldaha kamida caloosheeda ku jirta haddii ay dharruurtaan inaan lagu dhaleecayneynin. Isagoo ku halqabsanaya nin la odhan jirey Maxamed Xaashi (Buuri-hayste) ayuu yidhi Huube:
Rag la madhay mageyno iyo xidid, mudane saad qaatey
Kol haddaaad magaalana fadhidey, manina dhiibeysey
Muslax, Caamirow kuma gar-naqo, maliyo been beene
Hadba moosinkey taagan taan, kaga majiiraaye
Gar haddaan melmeli, Xaajigaanan marag ku qaadeene
Inaan adiga kula meel ahaad, muhatay dhowr jeere
Uus miirka kama maarannoo, waa mitibinnaaye
Hagaag, Gabaygii Huube ayaa gees walba u duulay, falanqayn iyo faaqidaad badan ayaa lagu sameeyey. Gadhcaddaagii iyo guurtigii sebenkaas ayaa gorfeeyey. Waxa la is weydiiyey horta yaa garta qaaday, geedkee se lagu qaaday?!! Xam-xam iyo xanshaashaq badan ayaa abuurmay. Dad badan ayaa saluugey hannaanka gartaa loo naqay, hawgu horreeyo Diiriye Aw Guuleed Warsame oo ka mid ahaa waxgaradkii waqtigaas. Diiriye Aw Guuleed oo madmadow badani iskaga gedaamay gar-qaadistii Huube, ayaa iska kari waayey bal inuu qawl yar su’aalo ninkan hawsha aan la bisleynin keligii isku qaaday. Judhiiba waxa uu su’aaley haddii Weerar dhaliishaa uu aloogay markhaatiyo usoo fadhiisin waayo, Xirsi-Caamir na dhaar ku xagaf siiyo, markaa sow dhanka Weerar dhaliishii dib uguma ciirin. Isagoo tixraacaya tuducyadii Huube ayuu yidhi Diiriye:
Macal qabasho dhaareed Xirsina, yaw mudh soo tidhiye
Midhkaasi weydiin deg deg ah oo maankiisa kusoo dhacdey ayay ahayde, immika ayuu Diiriye u hogbaday inuu gabay madax bannaan kaga fal-celiyo hannaankii uu Huube gartaa u naqay. Ugu horreynba wuxuu Diiriye Aw Guuleed ku canaantey Huube inuu xaajadii hororsaday, iyada oo aan laga wada shawrinna shanta la galay. Waxaa amakaag iyo af-kalaqaad ku noqotay, xaajo laba dhinac ka dhaxaysa oo weliba laysaga gabyey inuu Huube isaga oo aan sheekh iyo shaybe midna la kaashan keligii gartaa rido.
Waxaabad mooddaa iyaga oo geed gob ah isu doonyeystay inuu Diiriye weedhahan Huube hordhigey: Rag Allow xaggee baa lagu arkay xeerbeegti hal nin ka kooban!! Bal inaad Huubow xaajadii kirkirtay oo korandaalli ka tuurtay, afo iyo odeygeedii oo is qabtay kol ay ku tahay, sowkii sharcigu guurti laba dhinac ka kooban u saari jirey!!! Arrintaa aad sarka-xaadisey ee sahalka u gashay, rag aqoon leh, aw iyo haddii odayo loo geeyo, Alleylehe in aanay sida aad u dhigtey abidkeedna noqoneynin.
Ninna soo gad kii kalana, waatuu guddoonsadaye
Filo hormada 3aad dhowaan
Qalinkii: Shaafici Qaasim Nuur